Iresiphi yeLemon Champ, isiselo esiya kukumangalisa! | Ukupheka kweKhitshi
USusana godoy | | Kusela, Iirobhothi kunye neSmoothies
Namhlanje bendifuna into eyahlukileyo ke makhe sibone indlela yokulungisa okumnandi ILam yeLamiphe. Makhe sibone ukuba kuhamba njani nale niselo:
1 Izithako zokwenza iLemon Champ
2 Ukulungiswa kweLemon Champ
3 Uyenza njani i-lemon champ kwi-blender
Izithako zokwenza iLemon Champ
Ibhotile yeChampagne ebandayo
I-1/2 kg yeLemon ice cream
1 ilamuni isikwe kwizilayi ezi-6 zokuhombisa
Ukulungiswa kweLemon Champ
Hlanganisa iiglasi ngamanzi uze uzidlulise ngeswekile. Beka i-wedge wedge kwelinye icala kwaye ugcine.
Ngoku, lungisa i-ice cream kunye ne-1/2 ilitha ye-champagne kwijagi kwaye ubethe ngamandla de i-ayisi khrim inyibilike. Nika iiglasi iziqingatha kunye namalungiselelo afunyenweyo. Ukugqiba nge-champagne esitsha kwibhotile.
Uyenza njani i-lemon champ kwi-blender
Kukho amanyathelo aliqela esinokuwalandela yenza intsimi yelamuni elungileyo. Kodwa kukho enye ebaluleke kakhulu ukusinika isiphumo esincinci kakhulu. Ukwenza oku, siza kukwenza I-lemon champ kwi-blender. Ewe kuyinyani ukuba ungazixuba zombini izithako ngesandla. Ziya kudityaniswa ngendlela efanayo, kodwa iziphumo ziya kutshintsha kancinci.
Kule meko, obo bukhrim bukhrim buya kwenza ukuba ezi flavour zimbini zihlangane ngokupheleleyo. Ke kutheni ungazami nje? Izithako ziyafana. Kwelinye icala sinebhotile ye-champagne nakwelinye icala, isiqingatha sekhilogram ye-ice cream yelamuni. Ngoku lixesha lokubeka zombini izithako kwi-blender kwaye ushiye zombini imizuzwana embalwa. Siza kufezekisa iziphumo ezifanayo ngakumbi kwaye, njengoko besisazisa, okucocekileyo ngakumbi. Ngokuqinisekileyo zombini inkalakahla yakho kunye neendwendwe zakho ziya kukubulela!
Ngoku, kufuneka nje uthele lo mxube kwiiglasi ezinde nokonwabela. Ewe ungasoloko uzihombisa ezi glasi okanye iiglasi. Iswekile ejikeleze iziphelo zeglasi ixhaphake kakhulu. Ukwenza oku, kufuneka unyibilikise le ndawo ngamanzi amancinci, i-champagne okanye i-ayisi khrim encinci, engabonakaliyo, emva koko uhambe ngeswekile. Iziqhamo lolunye ukhetho olufanelekileyo lokuhombisa iglasi. Unayo ilamuni njengoko inika enye yezithako ezisisiseko zeglasi, nangona iitsheri ziyakubeka elona nqaku libalabala.
Kufuneka kuthiwe ukuba usafuna ukonwabela ukukhanya okukhanyayo, unenye indlela encinci. Endaweni ye-ice cream yelamuni, unokuhlala ukhetha Imousse yelamuni. Ungayifumana sele yenziwe okanye ungayenza ekhaya. Ukuba unexesha, ngokuqinisekileyo olu khetho lokugqibela luya kuba ngcono. Ngaphezulu kwayo nantoni na kuba siyakuyiphawula xa sonwabela i-lemon champ yethu kwi-blender. Ngaba ukhe wayizama?
Apha sichaza indlela yokwenza i-mousse ye-lemon eyenziweyo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Kusela » Iirobhothi kunye neSmoothies » ILam Champ
Ndiyalithanda eli xesha lokunonga
Ndingavuya kakhulu ukuba ungandazisa malunga nelemon cham ngaliphi ixesha le
isidlo sangokuhlwa sinikwa kwaye sinokunikwa njenge dessert Ndiyabonga kakhulu uNorma
isityebi kakhulu. Ingcebiso xa ijija, lumka ubambe isikhongozeli abasilungiselela sona, hayi indlela umama awayesenza ngayo ukuba asihlambe sobabini kwi-lemon champ ...
UAlejandro Exequiel Taborda sitsho
Lowo uneengxaki zengqondo nguwe
Phendula kuAlejandro Exequiel Taborda
Irayisi nepepile kunye netswele
Iintlanzi ze-tuna kunye negalikhi